skincare တွေထဲမှာ ထိရောက်မှု အရှိဆုံးလို့ဆိုတဲ့ Cosmedical product ဆိုတာ ? - For her Myanmar
skincare တွေထဲမှာ ထိရောက်မှု အရှိဆုံးလို့ဆိုတဲ့ Cosmedical product ဆိုတာ ?
ဟင်.. Cosmetic လည်း မဟုတ်.. Medical လည်း မဟုတ်.. ဘာလား Cosmedical???
ယောင်းတို့ရေ … ယောင်းက အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို မျက်ခြည်မပြတ်ကြည့်နေသူဆိုရင်တော့ အခုတစ်လော skincare လောကမှာ သိပ်ရေပန်းစားနေတဲ့ cosmedical ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သတိထားမိမယ်ထင်တယ်။ ဒါဆို cosmedical ဆိုတာ ဘာလဲနဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအကျိုးပြုလဲဆိုတာကိုရော သိကြပြီးပြီလား ?
Cosmedical ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ အသားအရေကုသနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက cosmedical က cosmetic လည်း မဟုတ်သလို ဆေးကုတာလို့လည်း လုံးလုံးလျားလျားပြောလို့မရပါဘူး။
Related Article >>> မျက်နှာလေးတွေ Glow နေဖို့ AHA/BHA က ဘယ်လို အကျိုးပြုသလဲ?
သာမန် skincare တွေထက် ထိရောက်မှုရှိပြီး အရေပြားပြဿနာတော်တော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် cosmedical product တွေကို လူကြိုက်များနေတာတော့ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါပဲ။ Cosmedical product တွေမှာ AHA/BHA လိုမျိုး အသားအရေကို အကျိုးပြုတဲ့ အက်ဆစ်ပျော့တွေ၊ Retinoid ဆိုတဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေ၊ ဗီတာမင်စီ၊ antioxidant တွေနဲ့ နေရောင်ကာဆေး (sunscreen) တွေမှာပါတဲ့ SPF တွေ အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။
Cosmedical product တွေရဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေကတော့
ဝက်ခြံနဲ့ တခြားသော အရေပြားပြဿနာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း၊
ချွေးပေါက်တွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြန်ကျဉ်းသွားစေခြင်း၊
အထိမခံတဲ့ sensitive skin သမားတွေအတွက် ယားယံတာ၊ နီမြန်းတာတွေကို သက်သာခြင်း၊
ရေရှည်စွဲသုံးတဲ့အခါမှာ အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွတ်စေပြီး glass skin ဖြစ်စေခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> တွဲမသုံးသင့်တဲ့ skincare ပစ္စည်း (၆) မျိုး
လောလောဆယ် Stella တို့ နိုင်ငံမှာလည်း cosmedical product တွေ တော်တော်များများတွေ့နေရပါပြီ။ သတိထားမိနေတဲ့ productတွေကတော့ Rincare ရဲ့ product လေးတွေပါ။ Rincare product တွေက ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဇီဝနည်းပညာသုတေသီတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါ ရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ဒီ Product တွေကို ဘယ်က ဝယ်ရမလဲလို့လည်း ခေါင်းခဲမနေပါနဲ့.. အက်ဒ်မင်တို့ For Her Myanmar နဲ့ Shop.com.mm တို့ ပူးပေါင်းထားတဲ့ Thingyan Flash Sale မှာ ဝယ်ယူလို့ရသလို ၄၀% ထိ ဒစ်စ်ကောင့်တွေလည်း ရဦးမှာမို့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးပါပဲ ယောင်းတို့ရေ… (Buy 1 Get 1 တွေတောင် ရှိသေးတယ်နော်.. ) စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အသေးစိတ်ကို ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင့်.. ဝယ်ဖို့အတွက် Shop.com.mm ရဲ့ App မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း Andriodဆို ဒီလင့်ခ် နဲ့ IOS ဆို ဒီလင့်ခ် လေးတွေမှာ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့ ရပါတယ်နော်..
Stella ကတော့ ဒီ Rincare ကို စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ယောင်းတို့ သုံးဖူးရင်လည်း Stella ကို ပြန်ပြောပြခဲ့ဦးနော်…
ဟငျ.. Cosmetic လညျး မဟုတျ.. Medical လညျး မဟုတျ.. ဘာလား Cosmedical???
ယောငျးတို့ရေ … ယောငျးက အသားအရထေိနျးသိမျးနညျးတှကေို မကျြခွမေပွတျကွညျ့နသေူဆိုရငျတော့ အခုတဈလော skincare လောကမှာ သိပျရပေနျးစားနတေဲ့ cosmedical ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သတိထားမိမယျထငျတယျ။ ဒါဆို cosmedical ဆိုတာ ဘာလဲနဲ့ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့နရောမှာ ဘယျလိုအကြိုးပွုလဲဆိုတာကိုရော သိကွပွီးပွီလား ?
Cosmedical ဆိုတာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈအနညျးငယျလောကျကမှ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားတဲ့ အသားအရကေုသနညျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထူးဆနျးတာက cosmedical က cosmetic လညျး မဟုတျသလို ဆေးကုတာလို့လညျး လုံးလုံးလြားလြားပွောလို့မရပါဘူး။
Related Article >>> မကျြနှာလေးတှေ Glow နဖေို့ AHA/BHA က ဘယျလို အကြိုးပွုသလဲ?
သာမနျ skincare တှထေကျ ထိရောကျမှုရှိပွီး အရပွေားပွဿနာတျောတျောမြားမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျစှမျးရှိတာကွောငျ့ cosmedical product တှကေို လူကွိုကျမြားနတောတော့ ငွငျးလို့မရတဲ့အခကျြပါပဲ။ Cosmedical product တှမှော AHA/BHA လိုမြိုး အသားအရကေို အကြိုးပွုတဲ့ အကျဆဈပြော့တှေ၊ Retinoid ဆိုတဲ့ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို နှေးကှေးစတေဲ့ဓာတျပေါငျးတှေ၊ ဗီတာမငျစီ၊ antioxidant တှနေဲ့ နရေောငျကာဆေး (sunscreen) တှမှောပါတဲ့ SPF တှေ အမြားဆုံးပါဝငျပါတယျ။
Cosmedical product တှရေဲ့ အကြိုးအာနိသငျတှကေတော့
ဝကျခွံနဲ့ တခွားသော အရပွေားပွဿနာတှကေို မွနျမွနျဆနျဖွရှေငျးပေးနိုငျခွငျး၊
ခြှေးပေါကျတှကေို အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ပွနျကဉျြးသှားစခွေငျး၊
အထိမခံတဲ့ sensitive skin သမားတှအေတှကျ ယားယံတာ၊ နီမွနျးတာတှကေို သကျသာခွငျး၊
ရရှေညျစှဲသုံးတဲ့အခါမှာ အသားအရကေို နူးညံ့ခြောမှတျစပွေီး glass skin ဖွဈစခွေငျး စတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> တှဲမသုံးသငျ့တဲ့ skincare ပစ်စညျး (၆) မြိုး
လောလောဆယျ Stella တို့ နိုငျငံမှာလညျး cosmedical product တှေ တျောတျောမြားမြားတှနေ့ရေပါပွီ။ သတိထားမိနတေဲ့ product ကတော့ Rincare ရဲ့ product လေးတှပေါ။ Rincare product တှကေ ဆေးဘကျဝငျပစ်စညျးတှနေဲ့ ပေါငျးစပျထားလို့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက ဇီဝနညျးပညာသုတသေီတှရေဲ့ အသိအမှတျပွုလကျမှတျပါ ရရှိထားတယျလို့ သိရပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ဒီ Product တှကေို ဘယျက ဝယျရမလဲလို့လညျး ခေါငျးခဲမနပေါနဲ့.. အကျဒျမငျတို့ For Her Myanmar နဲ့ Shop.com.mm တို့ ပူးပေါငျးထားတဲ့ Thingyan Flash Sale မှာ ဝယျယူလို့ရသလို ၄၀% ထိ ဒဈဈကောငျ့တှလေညျး ရဦးမှာမို့ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ အခှငျ့အရေးပါပဲ ယောငျးတို့ရေ… (Buy 1 Get 1 တှတေောငျ ရှိသေးတယျနျော.. ) စိတျဝငျစားတယျဆိုရငျတော့ အသေးစိတျကို ဒီလငျ့ချလေးမှာ ကွညျ့လို့ရပါတယျရှငျ့.. ဝယျဖို့အတှကျ Shop.com.mm ရဲ့ App မရှိသေးဘူးဆိုရငျလညျး Andriodဆို ဒီလငျ့ချ နဲ့ IOS ဆို ဒီလငျ့ချ လေးတှမှော ဒေါငျးလုတျဆှဲလို့ ရပါတယျနျော..
Stella ကတော့ ဒီ Rincare ကို စမျးသုံးကွညျ့ဖို့ စဉျးစားထားပါတယျ။ ယောငျးတို့ သုံးဖူးရငျလညျး Stella ကို ပွနျပွောပွခဲ့ဦးနျော …
Tags: Beauty, cosmedical, cosmetic, Knowledge, product, rincare, skincare
အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၄)
Kissing နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယောင်းတို့မသိသေးတဲ့ အချက်(၅)ချက်
Ana April 5, 2019
Ana September 22, 2019
Ana August 5, 2019
Ana July 5, 2019
Ana July 4, 2019
Ana June 21, 2019